မြစ်ရေကြီးမှုကိုလေ့လာခြင်း « MMWeather Information BLOG
« ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာမှ မုန်တိုင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မိုးပိုလာဦးမည်လား တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MUIFA-AUG5-update »
By mmweather.ygn, on August 17th, 2011
GDACS -Global Flood Detection System – Version2ဆိုတာကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံ အမျိုးသား အာကာသ အေဂျင်စီ(NSDA) ရဲ့ AQUA mission က EOD Aqua ဂြိုလ်တုမှတစ်ဆင့် အဆင့်မြင့် မိုက်ခရိုဝေ့ ရေဒီယိုမီတာ နည်းပညာ Advanced Microwave Scanning Radiometer for the Earth Observing System (AMSR-E) အသုံးပြုပြီး ရရှိတဲ့ အချက်လက်တွေကို ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ – Water-related Geophysical ပြောင်းလဲမှုတွေ၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကို ဖြစ်စေတဲ့ အချက်တွေ လေ့လာနိုင်အောင် တင်ပေးထားတဲ့ application တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ mission ရဲ့ အခြားသော ရည်ရွယ်ချက်တွေထဲက တချို့ကတော့ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အပူချိန်လေ့လာတိုင်းတာခြင်း၊ မြေဆီလွှာရှိ ရေထုစိုထိုင်းဆ ပါဝင်မှုကို လေ့လာတိုင်းတာခြင်း စတဲ့ အလုပ်တွေကို ၂ဝဝ၂ ခုနှစ်က လွှတ်တင်ထားတဲ့ Advanced Earth Observing Satellite-II (ADEOS-II) ဂြိုလ်တုမှ တိုင်းတာရယူပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
The Advanced Microwave Scanning Radiometer for the Earth Observing System (AMSR-E) was developed and provided to the National Aeronautics and Space Administration’s EOS Aqua satellite by the National Space Development Agency of Japan, as one of the indispensable instruments for Aqua’s mission. AMSR-E isamodified version of AMSR that was launched December 2002 aboard the Advanced Earth Observing Satellite-II (ADEOS-II). It isasix-frequency dual-polarized total-power passive microwave radiometer that observes water-related geophysical parameters supporting global change science and monitoring efforts. The hardware improvements over existing spaceborne microwave radiometers for Earth imaging include the largest main reflector of its kind and addition of 6.925-GHz channels. These improvements provide finer spatial resolution and the capability to retrieve sea surface temperature and soil moisture information onaglobal basis.
ဒီ AMSR-E application က ရတဲ့ အချက်အလက်တွေကို လေ့လာတဲ့ အခါမှာ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ မြစ်ကြီးတွေနဲ့ အချို့သော မြစ်ငယ်များ (ဥပမာ ငဝန်မြစ်) ရဲ့ ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်မှုတွေကို နေ့စဉ် လေ့လာပြီး – ပြီးခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်ရဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လေ့လာနိုင်အောင် database မှ ရှာဖွေ အသုံးချနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။အခု ညာဘက်က ပုံမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြစ်ကြီးများ မှ ရေမျက်နှာပြင် အခြေအနေတွေကို အရောင် ၃ မျိုးနဲ့ ခွဲခြားတိုင်းတာ ဖေါ်ပြပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်၊ အစိမ်းရောင် – ပုံမှန် မြစ်ရေမျက်နှာပြင် အခြေအနေ ၊ လိမ္မော်ရောင် – သတိထားရမဲ့ မြစ် ရေမျက်နှာပြင် အခြေအနေနဲ့ အနီရောင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့ မြစ်ရေမျက်နှာပြင် အခြေအနေဆိုပြီး တွေ့ရပါတယ်။
Site 39 – စစ်တောင်းမြစ်ရဲ့ မြို့လှနဲ့ သာဂရ အကြားက သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်က အခြေအနေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လေ့လာနိုင်မဲ့ ဂရပ်တွေနဲ့ ပြထားပါတယ်။ (အောက်ပုံ)
ဒီ application မှာ database ကို တိုက်ရိုက် လင့်တွေ ချိတ်ပေးထားတဲ့ အတွက် ကိုယ် ကြည့်လိုတဲ့ နေရာကို ကလစ်လုပ်ပြီးကြည့်ရင် အဲဒီနေရာရဲ့ ပဏာမ အချက်အလက်ကို စတင် တွေ့ရပါမယ်၊ view က နေတစ်ဆင့် ဆက်သွားကြည့်ရင်တော့ အဲဒီနေရာရဲ့ မြေပုံ (Google Map) ကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပြီး၊ အဲဒီ မြေပုံကို အောက်ပုံကအတိုင်း ကိုယ်လိုသလို ပြင်ဆင် အသုံးချနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ MMW က လဲ ဒီ application ကို ဆက်ပြီး လေ့လာနေဆဲပါဘဲ ၊ မိုးလေဝသနဲ့ ဇလဗေဒ ပညာရပ်မှာ စိတ်ပါဝင်စားသူတွေ ကိုယ်တိုင်လေ့လာဆည်းပူးနိုင်အောင် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ –
မိမိလေ့လာလိုသည့် နိုင်ငံ၏ အမည်ကို ရွေးချယ်ပါ – ပြီးလျှင် “Find Areas” Button ကို နှိပ်ပါ၊ Loading အတွက် ခေတ္တစောင့်ပေးပါ
Uncategorized « ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာမှ မုန်တိုင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မိုးပိုလာဦးမည်လား တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MUIFA-AUG5-update »
« ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာမှ မုန်တိုင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မိုးပိုလာဦးမည်လား တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MUIFA-AUG5-update »	Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum